Ingabe i-Cannonball Run ayikho emthethweni? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Uyini umdlalo we-cannonball - ungaxazulula kanjani
Uyini umdlalo we-cannonball - ungaxazulula kanjani
Ingabe i-Cannonball Run ayikho emthethweni?
IngabeI-Cannonballukuumjaho? HHAYI,I-Cannonballakuyona i-umjaho. Ikonaengekho emthethweniukuumjahonoma weqe umkhawulo wejubane othunyelwe emigwaqeni yomphakathi.I-Cannonballirally yomgwaqo webanga elide egxilile ekuzijabuliseni nasekuhloleni, cabanga ngakho njengeholide lokugcina ngemoto yakho.
Lapha eNyakatho neFlorida i-Amelia Island Concours d'Elegance umcimbi ongaphuthelwa futhi indoda engemuva kwayo yindoda engakwesokudla kuBillWarner futhi ngingakubeka kanjani lokho, ngizoba nenhlonipho, omunye wabancintisana noMthethosivivinywa Impilo yemotorport iseduze kwakhe uJack May, uJack Bill ungaba kanjani abangane, ikakhulukazi wena kodwa ngizokubuza ukuthi akazange yini akushaye ku-1975 Cannonball Run, awu, yebo, uqinile, kepha ngithole yonke into Uthole udumo kuyena wenza isibhamu ophahleni lwegaraji elibomvu futhi zonke izimoto zikleliswe kudino wakhe omhlophe, ngaphambili nangaphakathi, imoto engemuva kwethu lapha, kahle, ibivuza uphethiloli, ngakho-ke kuye kwadingeka baphume bayokulungisa, badinga imoto emhlophe ngakho-ke babone iPorsche 911 yami, ngathola isikhundla sepoli ngathola lonke udumo ngathola ikhava yemoto nomshayeli kodwa yena wafika lapho Won s race and ukufotokopa ukuyilungisa, ayimqedanga uJack, ngicabanga ukuthi ngeke uzifake engozini ngamahora ayi-11 agcwele ngisho ukuthi kubiza okuthile ukuba seDockland eBronx indlela eya eCalifornia futhi ukwenzile lokhu ngokugqokwa kancane futhi usephuzile ngamahora ayi-11 futhi ijubane elijwayelekile elilodwa ngilutholile lolu lwazi, bekuyini lokho? Indaba emnandi manje amahora ayi-11 manje i-83 mph isilinganiso esivela e-caustic Austin Continental naseNyakatho Melika ngabe uhambe ngokushesha okukhulu ukube bekungekhona lawo maphoyisa akhathazayo e-ohio kwakuwashi owawucabanga ukuthi ngicabanga ukuthi ngikholelwa kulo 120 120 on a umgwaqo womphakathi, yebo umkhawulo wejubane ngu-55, yebo bekungumbhikisho omelene nomkhawulo wejubane lama-55 mph ngakho ubukade uhamba phambili kulo mcimbi, engikushoyo? Lo mcimbi unesithunzi kangangokuba benze ifilimu ngawo yebo benza ifilimu yesibili iWarner Brothers basanda kusayina enye ifilimu ye-cannonball ukhona kuleyo movie million dollars ngayibiza ngeBrock Hell ngawina i-cannonball ngizoyenza mahhala wathi yebo h kodwa awunalo ihhovisi lebhokisi khetha igama lami lesidlaliso elivela eMbuthweni Wezindiza kwakunguCaptain Marvel, ngakho-ke ngaba uCaptain Marvel, ipuleti lami lelayisensi kwakunguShazam Captain Marvel, ngakho-ke ebhayisikobho iDom deluise idlala uCaptain Chaos futhi njengoba ngishilo Yates du du du du Dom Ngingu DeLuise kwi-movie ngatshela wonke umuntu ukuthi nginguBurt Reynolds kwase kuthi unkosikazi wami wazibandakanya, yayingekho indlela yokuthi ubunguBurt, ubunguDom DeLuise, lokho akuyona inkinga indima ye-Ablooper? Ngakho-ke nize, beningebona abangani ekuqaleni kwalo mcimbi, nakanjani beningabangani ekugcineni, kepha nina nihlale niphuthelwe yimijaho yamaSeca iminyaka engaphezu kwengu-40 ngishayela i-gt3 yena eshayela umkhiqizo, ngakho nina bafana nina bantu Ngakho-ke wayengeyena umpetha kazwelonke weSeca kulokho kunqoba okudabukisayo, iSpitfire, kunjalo, ngakho-ke nihlangane kusuka kuthrekhi futhi nimanzi, kwenzeke kanjani ukuba iCannonball Run ifike? Ngabe wakwenza evenini ebizwa nge-Moon Trash futhi wabhala indaba yokuthi wasuka kanjani eNew York waya e-LA futhi amahora angama-42 izincwadi zika-ollie ezivela kubantu zithi, oh ngingazenza zikhuluphale, uthi kuhle asigijime umjaho kanjalo kwenzeke lokhu? ushayela yonke imigoqo noma ngabe wabelane ngedrayivu engihlanganyele nayo nomunye umngani wami ongumpetha kazwelonke ogama lakhe linguRick Klein, ngamlahlekela lokho, engangisebenza naye akazange angitshele ukuthi uzoshayela ebusuku nango-2 ngehora lesishiyagalombili angashayela ekuseni walala ep futhi ngahamba yonke indawo ngisuka eNew York City ngaya eLittle Rock Arkansas, lapho wawuthola khona umbayimbayi wango-1975 ngaleso sikhathi, une-Jackyeah ebiziwe, sinomaki omncane I bekungaba okwami ​​ukucabanga ikani, kepha babiza kanjani? yakhiwe ngapha kwakhiwe kuvaliwe okuchithe inkumbulo yakho enhle ngendaba emnandi yomcimbi izimpande ziyahlangana ungathatha umzila wasenyakatho noma umzila waseningizimu senze iphutha lokwazi ukuthi i-Illinois ne-Ohio Highway Patrol ibibheke thina, nomlingani wami, futhi sithathe umzila oseningizimu odlula eTennessee. Hhayi-ke, yonke imizila yahlangana e-Oklahoma futhi sasinohlu lwabo bonke abantu esincintisana nabo kanye nezibambo zabo ze-CB ngakho-ke sihamba nabo futhi ngizwa inzondo yami, kuthiwani ngawe CaptainMarvel, ngathi wenze? Le onayo laphaya yiSundance yakhe futhi ngabheka kulolu hlu ngathi angazi noma iyiphi iSundance Uthi iyiPortofino eRedondo Beach, eCalifornia, lapho-ke lapho siya khona kusho okusha. Ngathi yebo-kane, kusho ukuthi, ukuphi, ngiku-64 mile mark, ukuphi, uthi, ngineminyaka engama-66 kwavela ukuthi yiveni yakwaFord enomatilasi owakhelwe ukusebenza bangidla umuntu wathi uTom Neal umgibeli wami, yebo sishiyile? umngani ongalungile, sisemuva kwaleyonto iFord ngakho ngigibele i-911 kancane entshonalanga ye-Oklahoma futhi benza cishe i-115 ngathi, kahle, sise-64 lapho uthi sikuma-66, lalela ukuthi iveni can? Musa ukushesha ngaleyo ndlela ngavula i-911, ngishayela i-130 futhi ngathola i-interstate e-Oklahoma manje ku-66, ukuphi futhi ubuya nesiginali ebuthakathaka futhi uthi uku-68, awu, mile ngemuva kwami ​​izinyanga ezintathu ngamtshela ukuthi ungamakhilomitha amabili ngaphambi kwami, ngethemba lokuthi ngizothatha uhambo futhi amaphoyisa azongikhohlwa futhi uzoboshwa ngaphambi kokuba aqede kulokho okwakuseWest Virginia wahamba nalolu bumbano. kuzobasiza ukuthi bamsize abe nejel kulo lonke idolobha futhi amaphoyisa ayamethemba uma kungenzeka ukuthi amlandile amfaka ejele usuku lonke.
Baboshwe ngezinsolo zokwephula umthetho kaMann, ukuhambisa izingane ezingaphansi kweminyaka yobudala ezinqoleni zombuso ngenhloso yokuziphatha kabi. Abantu abanezindaba ezihlekisayo sinesimiso esiqinile bantu futhi ngiyazi ukuthi singakhuluma nani usuku lonke kodwa siyabonga ngokuthatha isikhathi sokukhuluma nathi futhi sihlanganyele nje lokhu okuhlangenwe nakho, Jack ohlakaniphile, kuhlale kuyintokozo ukuba nawe mngani wami, lokhu kuyimbangi yaseFlorida lapha yebo abafana abathandekayo, izinto ezinhle embukisweni wokuqala Yebo, kunjalo, zombili izimoto zethu lokho kugijimise igumbi lokudlalela izinganono yebo usenazo obekungaba nomqondo omuhle, mhlawumbe ngonyaka ozayo wakha idokodo lesikhumbuzo le-cannonball ongasoze walikhumbula awusoze wayithola imoto eyodwa enhle hamba cha cha, ushada nowesifazane omuhle futhi ugcina imoto enhle futhi yinhle kufanele nakanjani siqhubeke
Uyini umzila weCannonball Run?
I-Ukugijima kwe-Cannonballyirekhodi lejubane elingagunyaziwe, elivame ukwamukelwagijimaukusuka eRed Ball Garage eNew York City kuya ePortofino Hotel eRedondo Beach ngaseLos Angeles, ibanga elingamakhilomitha angaba ngu-4 500.
Ngabe iCannonball Run isebenza kanjani?
I-2020Ukugijima kwe-Cannonball(i- “Gijima”) Imayelana nobumnandi nokuhlola, futhi akuwona umcimbi wokuncintisana. Ababambiqhaza bazoshayela Izimoto abazinikezayo kufayela le-Gijimaumzila (ngamunye “Imoto”), okubandakanya izitobhi ezilandelayo: ICalgary iye eChicago. ITour nezitobha zingashintsha ngokuqonda kwe-TRT.
Noma nini lapho uhlu lwemisebenzi eyingozi kakhulu emhlabeni lushicilelwa, abagawuli bezingodo, abasebenza ngezinsimbi, abafaka izintambo zikagesi, nabadobi imisipha evame ukuba yimisebenzi egcwele ohlwini. Kepha azikho kulezi zinto ezisondelene nokuyingozi njengokuphonswa ngaphandle komgqomo wesilinda wesikhathi eside, zihanjiswe emoyeni ziqaqulwe ngokuphelele, zizama ukuhlala ngokuphepha phansi. Njengoba uzobona maduze nje lapho i-Bureau of Labor Statistics isanda kufaka ohlwini ukugawulwa kwemithi njengomsebenzi oyingozi kakhulu eMelika ngokufa kwabantu abayi-127.8 kwabangu-100,000 bathi lokho kuyahlekisa uma kuqhathaniswa namazinga okufa kwamabhanoyi abantu.
I-cannonball yomuntu yaqala ukwaziwa umphakathi ngasekupheleni kwekhulu le-19. Ngo-1871 indoda eyiNgisi egama layo linguGeorge Farini yathuthukisa indlela eyayibiza ngokuthi imithombo 'yeprojektha' nenjoloba yaseNdiya, yayimane nje iyipulatifomu eneziphethu. Kwakungabonakali njengenkanunu; kepha lapho ikhishwa yadubula umuntu (noma ngabe yini eyayisesiteji) phambili.
Wafaka isicelo futhi wathola ilungelo lobunikazi lwensimbi yakhe ngoJuni 13, 1871. Eminyakeni emibili kamuva, ngo-1873, i- “projektha” yavela okokuqala emphakathini waseMelika (akwaziwa ukuthi / yaboniswa nini izilaleli ezingamaNgisi ) e-Broadway theatre eyaziwa nge-Niblo's Garden eNew York City. Ngenxa yobukhulu bukaFarini uqobo, wayengeyena umuntu owaqhuma ngalobo busuku.
Esikhundleni salokho, 'uLulu,' insizwa encane egqoke izingubo zabesifazane uGeorge ayeyiqeqeshe, wayengumlingisi. Ngenkathi uGeorge ededela isiqhebezo esasiphethe intwasahlobo, uLulu wadubula amamitha ayishumi emoyeni wabamba izingongolo zomdlalo wesibani olenga ophahleni. Isixuku saya ehlane.
UGeorge noLulu bashayiwe bathatha imigwaqo ngesenzo sabo sesekisi. Ngo-1875, uLulu wayaziwa ngokuthi 'yiNdlovukazi yabaTrapezists', kodwa isenzo sakhe sancishiswa yinto entsha embonini yabantu. Kunemibiko ephikisanayo yokuthi ngubani owenze isenzo sokuqala somuntu sokudlala inganono - i-'Australia Marvels 'u-Ella Zuila noGeorge Loyal, noma uRossa Matilda Richter oneminyaka engu-14, owaziwa nangokuthi' uZazel '.
Ngokusho kwe- circushistory.org, ama-Aussies aqala ukwenza itayitela eSydney ngo-1872 ngenkathi uGeorge edutshulwa esesilindini esikhulu kanti u-Ella wambamba ngenkathi ese-bar trapezoid. Eminye imithombo ithi uZazel wayeyibhola lokuqala lomuntu ngenkathi ebulawa ngo-1877 enza uhlobo olufanayo lokuphamba phambi kwezithameli ezibukhoma eRoyal Aquarium eLondon.
Kamuva waqashwa futhi waba yingxenye yombukiso kaPTBarnum. Vele, uma izinsuku zizokholwa, Ngokuphikisana nemibiko eminingi, iZazzle kubonakala sengathi ize endaweni yesibili. Kodwa-ke, i-cannonball yomuntu yajabulisa izethameli.
Ingozi, injabulo, nesibindi kudonse ukunakekela kwawo wonke umuntu ching. Amaseksi amahle kakhulu angaleso sikhathi, kufaka phakathi i-PT Barnum's neYankee Robinson Circus (lapho uZuila noLoyal bagcina bedlala khona eMelika) bakubona lokhu futhi bazi ukuthi kwakuyisisekelo Imishini yokudubula umuntu ngenganono empeleni ayinzima kangako. Eqinisweni, lokho okubizwa ngokuthi 'inganono' empeleni akuyona inganono.
I-gunpowder, ejwayele ukutholakala ezinkanukweni ezijwayelekile, ayikaze ibe ngumfutho wokudubula abantu (yize kwesinye isikhathi kuthinta imiphumela emikhulu, isibhamu sisetshenziswa ngaphandle ukuyinikeza 'ubucayi obubonakalayo.' Njenganoma yisiphi isenzo, abalingisi bokuyimfihlo bavame ukuba manqikanqika ukuthola isayensi ngqo ngemuva kwendlela yabo, kepha amadivayisi asebenza kakhulu njenge-catapult noma inqola ehambayo.
Kalula nje, othile ungena emgqonyeni futhi umoya ocindezelweyo uwusunduza iPlatform ngamandla angamakhilogremu angu-3 000 kuya ku-6,000 nge-intshi ngayinye (psi.) Yengcindezi. Ipulatifomu iyama embhedeni wesibhamu, kodwa umuntu uyaqhubeka nokungena phezulu emoyeni.
Le micibisholo yabantu ingavulwa ngejubane elingaphezu kwamamayela angama-70 ngehora (irekhodi lomhlaba lingama-74.6 mph noma u-120.057 km / h) kuze kufike ebangeni lamamitha angama-200 nokuphakama okungaphezu kwamamitha angama-75.
Ama-cannonball womuntu aze abikwa ukuthi amnyama emoyeni ngenxa ye-G-force eyedlulele (kuze kube amandla ayisishiyagalolunye adonsela phansi ngokujwayelekile). Futhi uma lokho kungahambisani nezinga lakho leengozi, ukufika empeleni kuyingxenye eyingozi kakhulu yebhola lomuntu. Ngaphambi kokuqala, abesilisa nabesifazane abangama-stunt babeke ngokucophelela nangokucophelela amanetha okuphepha noma izinhloso ezingangena ukuze bazibambe.
Yize lezi zinhloso ziba cishe ngamamitha ayi-15 kuya kwangama-25, zisencane ngokumangazayo kumuntu ohamba ngamamitha angama-60 emoyeni. Ngaphambi kokuba kufike izethameli, abasebenzi bahlola lezi zinhloso ngokubeka onodoli abangama-rag (isisindo esilingana nesabalingani babo abangabantu) ku-canon bese bebadubula phansi ukuze babone ukuthi bahlala kuphi nokuthi ngabe umgomo ungabamba yini. Zivumelanisa ngokufanele.
Uma konke ukuhlolwa kuhamba kahle, isenzo sizoqhubeka njengokujwayelekile. Uma kungenjalo, abaculi bazoshiya phansi 'bangavezi noma yiliphi iphutha elingaba khona noma uma umculi engakhanseli yize kunesiqiniseko sokuthi le nhlekelele iyenzeka. Isazi-mlando saseBrithani esingasekho u-AH Coxe wake walinganisela ukuthi kubantu abangu-50 ngaleso sikhathi ababesebenze izinganono zabantu ukuba babe umsebenzi wabo, abangu-30 bafa kulesi senzo - ikakhulu ngenxa yezinkinga zokukhomba.
Abanye balimale kanzima. URossa Matilda Richter, iphayona lethu le-cannonball elineminyaka engu-14 ubudala, wephuke iqolo ngenkathi esebenzela i-PT Barnum ngenkathi ephuthelwa yilokho ayekuhlosile. NgoJuni 8, 1987, u-Elvin Bale, ngesikhathi sokudlala kweBarnum & Bailey Circus, weqa umgomo wakhe wokufika ngoba i-dummy ehlolwe ibimanzi ngakho-ke inzima.
Wayekhubazekile emilenzeni yomibili. Abanye babengenayo inhlanhla. Phambi kwababukeli abayizinkulungwane ezimbili ngo-2011, uMatt Cranch wayengu-.
Ngokokuqala ngqa wayengumuntu odlalela abantu ngenganono. Wadutshulwa emoyeni wafinyelela ebangeni elicishe libe ngamamitha ayi-12, kodwa inetha lakhe lawa lapho wehla. Ufike wabheka phansi wabulawa umthelela.
Naphezu kwezingozi, kuye kwaba namabhola womuntu amaningi aphumelele futhi adumile. Futhi kaningi kwakuyindaba yomndeni. Umndeni wakwaZacchini, obejwayele ukusebenza ngaphansi kwenkontileka neRingling Circus, waba igama ekudutshulweni kwenganono yabantu cishe ngekhulu lama-20.
Ngasekuqaleni kwawo-1920, abafowabo abayisihlanu bomndeni abayisikhombisa baya ezulwini, kanti umndeni wawuzodlala kuze kube ngawo-1990. Abafowethu uVictor noHugo bathuthukisa uhlobo lwesenzo sabo esinemigoqo emibili. UMfoweth 'uMario wake wandiza ngaphezu kwamasondo amabili e-ferris.
umhwebi ujoyina impilo
Namuhla amagama amakhulu kakhulu ekudutshulweni kwabantu angabomndeni wakwaSmith. ikakhulukazi uDavid 'Cannonball' Smith nendodana yakhe, uDavid 'The Bullet' Smith Jr. Empeleni, uDavid Sr. wayephethe irekhodi lomhlaba ngendiza ende kunazo zonke yomuntu kuze kube ngoMeyi 2011 lapho indodana yakhe uHugo Zacchini weZa edumile. waqhekeza abafowethu baka-cchini, futhi unendondo emlandweni evela eNkantolo Ephakeme yase-US.
Ngo-1972, uHugo wayedlala embukisweni wase-Ohio lapho intatheli yaseScripps Howard iqopha imizuzwana eyishumi nanhlanu yesenzo sakhe, eyanele ukuthatha cishe konke ukususwa nokwehla. Kuboniswe ezindabeni zakusihlwa, kepha uZacchini wamangalela, wathi abanalo ilungelo lokukhombisa konke akwenzayo, impahla yakhe enobuhlakani, ngaphandle kokumnxephezela ngokwanele. Ngemuva kokuthi iNkantolo Ephakeme yase-Ohio ikhiphe isinqumo esivuna uScripps-Howard, uZacchini wayisa eNkantolo Ephakeme yase-United States.
Ngo-1977 iNkantolo Ephakeme yakhipha isinqumo esivuna uZacchini ngamaphuzu ayisihlanu kuya kwamane, umbono weningi uthi uZacchini akafanelwe kuphela ukunxeshezelwa ngesikhathi kanye nomzamo obandakanyekile esenzweni sakhe, kodwa futhi 'nangesikhuthazo somnotho kuye' ekutshalweni okudingekayo thola ukusebenza okuzokhanga umphakathi. '
Ngabe kukhona oshonile enza iCannonball Run?
UHeidi von Beltz, owesifazane oqinela okhubazekile lapho i-stunt ihamba kabi kakhulu kusethi yeTheUkugijima kwe-Cannonball,washonaNgoLwesithathu eTarzana (Calif.) Medical Center.Okthoba 29 2015
Amabhayisikobho angaba yindawo ephephile yezethameli yokuthola izinjabulo ezingenabungozi, kepha ukuqaphela lawo mandla abonisa umhlathi kungaba yingozi kubo bonke abathintekayo. Lawa mafilimu ikakhulukazi abenezingozi ezibulala kakhulu emlandweni waseHollywood, kodwa ngaphambi kokuqala kabusha kweGone in Sixty Seconds kwashaya ibhokisi ngo-2000, umqondisi wefilimu yokuqala, uToby Halicki, wafuna enye inkondlo elandela eyokuqala Ngo-1974 enza lokho okwakungabizwa ngokuthi Kudlulile ku-Sixty Seconds 2, indaba yokwethuka kusethi ye-movie yokuqala lapho alimala khona umgogodla womlomo wesibeletho ngesikhathi sokudlikiza okukhulu kwesithathu. Yize kunjalo, uHalicki ubuyele emlandweni ngonyaka we-1989 futhi wanquma ukungeza kokumangazayo ngokuba nesinqola sogandaganda sashayisana nombhoshongo wamanzi, ngeshwa ikhebula lezinsizakalo zesakhiwo laphuka lagingqika phezu kocingo olwaluchoboza uHalicki ngaphansi kwesisindo sakhe iThe Twilight Indawo: The MovieJohannes Landis 'original 1983 segment in Twilight Zone: The Movie, entitled' Isikhathi Sokuphuma, 'wadlala umlingisi uVic Morrow njengendoda ebambe ongezansi egama linguBill Connor owakhohliswa ukuthi azibekele inzondo ngamehlo akhe efakaza enye njengoba ehamba ezinye yezingxabano ezesabekayo ezizinhlanga ezizinze ekhulwini lama-20.
Lesi sigaba bekufanele siphele lapho uBill esindisa izingane ezimbili zaseVietnam empini yehlathi ukuze zizisindise, kepha ukuqoshwa kwaleyo ndawo kwenzeka kabi ngezindiza ezinophephela emhlane ezihamba phezulu ukulingisa ubungozi bendawo leyo. Imoto ibilawulwa ngumshayeli onamava, kepha udaka lwaqhuma kakhulu eduze komkhumbi ngemuva kokuthi umqondisi efuna ukuthi umshayeli wendiza ayishayele phansi imoto kunaleyo ayengamele ukuqhuma kwayo, futhi umthelela walahlekisela izimpilo zabo bonke abalingisi abathathu. Ngokusho kukasaziwayo uDick Peabody, 'amazwi kaVic wokugcina empilweni ngenkathi ephethe izingane ezimbili futhi elinde umqondisi.' Ukusho ukuthi 'isenzo' bekungukuthi, 'kufanele ngiphambane ukuze ngithole lokhu kudutshulwa.
Bekufanele ngicele ukuphindwa kabili. 'Umgibeli Waphakathi kwamabili Umgibeli phakathi kwamabili obekwe eJesup, eGeorgia waba yisigameko sobugebengu lapho umqondisi uRandall Miller ebekwa icala lokubulala ngemuva kokushona komunye wabasebenzi bakhe engozini engavikeleka kakhulu. Abalingisi nethimba bathunyelwe empondweni yendawo ukuqopha indawo lapho uWilliam Hurt ayelele khona embhedeni kujantshi, futhi batshelwa ukuthi bazophunyuka ngewindi lesibili lama-60 lapho kufika isitimela.
Ngeshwa, bekungasondeli ngokwanele ukuletha wonke umuntu endaweni ephephile, kanti umsizi wekhamera oneminyaka engu-27 ubudala uSarah Jones ushayiswe yingozi imoto kwathi abanye abaningi balimala. Isigameko esinyantisa igazi sithwetshulwe ngamakhamera ezisebenzi, kanti umphathi wefilimu ulivumile icala lokubulala ngobudedengu ngenxa yengozi. Ukhululwe ejele ngo-2016, kodwa namanje akukho emthethweni ukuthi avele kwifilimu enomsebenzi wezokuphepha.
UCrowActor Brandon Lee, indodana yesilomo somdlalo wempi uBruce Lee, wayekulungele ukulingisa kuThe Crow kusuka emisileni yesiketi sikayise esidumile, kepha impilo yakhe yanqanyulwa kabuhlungu ngenkathi kudutshulwana okwenzeka njalo ngo-Mashi 1993. ; isibhamu iMagnum .44 esisetshenziswe endaweni eyodwa kuthiwa senziwe ngengubo eyodwa engenabungozi ilayishiwe, kodwa sasinocezu lwenhlamvu ngaphambili ekamelweni. Lapho ixoshwa njengoba kuhlelwe yinkanyezi kaLee uMichael Massee, le nhlamvu yahlaba umthambo kaLee esiswini; akakwazanga ukusindiswa naphezu kwamahora omzamo wokuhlinzwa.
Isitudiyo nabenzi bamafilimu bathole ithuba lokwethula isithombe ngokugcwele, nomshwalense wokukhokhela izindleko zokukhiqiza. Kodwa-ke, banqume ukuqhubeka nokubhekana nesibonelelo sokuqoqa izingcezu zikaLee ezisele ukuthi umsebenzi wokugcina wempilo yakhe ungabiwa. Umlingisi owadonsa inhlamvu kamuva wathi, 'Akufanele ngisho ngiphathe isibhamu size siqale ukuqopha, kodwa basishintsha.
Angicabangi ukuthi uyoke udlule kukho. 'Into enjengaleyo. ”Le filimu yagcina ikhishwe ngo-1994 yathandwa kakhulu futhi, ngokungafani nenganekwane yasemadolobheni, yayingenayo imidwebo yangempela yesilonda sikaLee.
Isibhamu Esiphezulu Onke lawo maqhinga asemoyeni enza iTop Gun yaba yifilimu e-idiosyncratic yeza ngentengo ebucayi komunye wabashayeli bezindiza abafake isandla kuyo. Impilo ka-Art Scholl, owayengumakadebona wezindiza, yalahleka ngesikhathi kwenziwa i-action-adventure classic yango-1986 ngemuva kokwehluleka ukulawula indiza yakhe ngesikhathi indiza eyayiphambukile yaphonseka olwandle iPacific Ocean. Eerily, izimo zengozi bezicishe zifane nalokho okwenzeka kule filimu uqobo, lapho umlingisi uGoose naye ashonela khona ngemuva kokuhluleka ukululama ngemuva kokuphola.
Le nhlangano ibithathwa njengephansi uma kuqhathaniswa. Ingozi kumshayeli osezingeni lakhe, futhi akunakwenzeka ukwazi ukuthi konakelephi ngalolo suku selokhu umkhumbi nomzimba wakhe kungakaze kutholakale, futhi lokhu bekungeke kube yifilimu yokugcina kaTom Cruise, ongumshayeli wezindiza onekhono waseMelika uM MadeThe Colombian ukukhiqizwa kweAmerican Made kwaba yindawo yenhlekelele lapho abashayeli bezindiza ababili belahlekelwa yimiphefumulo yabo engozini yendiza esethi. Ifilimu, ebiphefumulela impilo yesinema endabeni eyiqiniso kaBarry Seal, umshayeli wendiza ohlasele ukusebenza eCentral America kweCIA, ubedinga izithombe eziningi zasemoyeni kanye nama-acrobatics ezimweni eziyingozi.
Futhi ngoSepthemba 2015, umzamo wokubuya ukuze uthole ezinye izibhamu wasesibhakabhakeni waba yinhlekelele ngenkathi indiza yaphahlazeka eduzane nedolobhana elincane yathola ukuphahlazeka ngemuva nje kwengozi futhi yathola ukuthi bobathathu abashayeli bezindiza abebephakathi bebesaphila, yize beshile. Ngesikhathi kufika i-medical aid, munye kuphela owayephila ngenkathi laba abanye ababili beseshonile. Imindeni yabashonile yafaka izinyathelo zomthetho kulezi zitudiyo, isola ukuthi umlingisi uTom Cruise kanye nomqondisi uDoug Liman bacele ukuqoshwa 'okunethezeka' ezinsukwini eziningi, okungenzeka kube nomthelela odalweni lokuphahlazeka kwendiza.
UCruise ngokwakhe kuthiwa ubehamba ngendiza enophephela emhlane enqamula kule ndawo kusasele imizuzu embalwa kwenzeke le nhlekelele. Siybaonga ngokubukela! Chofoza isithonjana se-grunge ukubhalisela isiteshi sethu se-YouTube. Futhi hlola zonke lezi zinto ezinhle ngoba siyazi ukuthi uzobathanda nabo!
Ingabe ukhona umklomelo we-Cannonball Run?
Imali yokungena ingama- $ 20,000 futhi ifaka nezindawo zokuhlala, umcimbi wokuqalisa umdlalo ePlayboy Mansion nephathi engasoze yalibaleka ubusuku ngabunye kwidolobha ngalinye elizosingatha indlela .; Leyo mali ibuye iqhumeumklomeloimali yeqembu eliwinayo nemoto kusuka kubuncane obuqinisekisiwe bama- $ 100,000 okungenzeka kube yisigidi samadola23 juni 2008 r.
Ngabe iGumball 3000 isemthethweni?
I-IGumball 3000akuwona umjaho, nabahlanganyeli abashayela ngaphezu komkhawulo wejubane, bashayela budedengu noma ngenye indlela baphule umjahoumthethoangaboshwa futhi abekwe icala ngamaphoyisa endawo.
I-cannonball ihamba kangaki mph?
I-I-CannonballGijima: Uhambo nomjaho, gijima ngejubane le-warp. Noma cishe ama-80mph. Amaphoyisa ajwayele ukuzazi kahle izimoto, kusho uTabbutt, kepha izinyathelo zokumelana nazo zenzelwe ukudida noma ngabe umzuzwana nje, okuyintokungenzekayenza umehluko uma bedonswa.Dis 6 2019
Ngabe yisiphi isikhathi esisheshayo se-Cannonball Run?
Yini eshesha kakhuluzamanjeUkugijima kwe-Cannonballukuqopha? UMeyi 2020Ukugijima kwe-Cannonballngu-Arne Toman noDoug Tabutt kwi-Audi S6 ka-2016 yirekhodi lamanje, ngamahora angama-25 nemizuzu engama-39. Ijubane elihlanyayo le-110 mph litholakele kuleli rekhodigijima.13 uNovemba. 2020 g.
Ngabe ukhona umuntu ongayenza iGumball 3000?
Kufanele uphathe ilayisense yokushayela yamanje, evumelekile futhi engavinjelwekuthandaukwamukelwa kunoma yiliphi izwe nakuwo wonke amazwe kanye nepasipoti yamanje futhi evumelekile kanye nama-visa (ama) afanele wezwe ngalinye avakashelwe kumcimbi phakathi nomzila.
Yini isikhathi sikaRichard Rawlings Cannonball Run?
Ukugijima kwe-Cannonball/ Bullrun
NgoMeyi 2007,URichard Rawlingsnomshayeli wendiza uDennis Collins kusolwa ukuthi wephule unyaka we-1979Isikhathi sokuqalisa se-Cannonballukusuka eNew York City kuya eLos Angeles amahora angama-32 nemizuzu engama-51.